Kayseri Erciyes Yakaunzwa neThai Tourism | RayHaber
mushaTURKEYCentral Anatolia Region38 KayseriKayseri Erciyes Yakatangwa neThai Tourism
Kayseri Erciyes Yakatangwa neThai Tourism
01 / 12 / 2019 38 Kayseri, Central Anatolia Region, GENERAL, TURKEY, TELPHER
Kayseri Erciyes akaunzwa kune vashandi vekushanya muThailand, iyo yakazivikanwa semusika mukati meiyero yeiyo itsva yekushanya nekusimudzira zano.
Mumusangano weKayseri-Erciyes wekusimudzira wakaitirwa muBangkok, guta guru reThailand nehurongwa hweTurkey Airlines Kayseri Directorate, Kayseri vamiriri vezvekushanya pamwe nevakuru vakuru vehotera vakasangana nevamiriri vevashandi vekushanya muThailand.
Iko kugona kwekudyidzana kwakaongororwa musangano umo kushanya kwakaungana. Runako rwezvisikwa rweKayseri, kunyanya Erciyes, rwakatsanangurwa muhupfumi hwekushanya nehutsika hwenzvimbo uye kubvunzurudzwa kwakanangana.
zvichiratidza kuti vanhu vakawanda vaida kuenda Bangkok kubva Thailand kusvikira Turkey Turkey kuti Ambassador kusvika Universe Dağdelen Akgun, "vanhu vachava kufunga Turkey muna Thailand kazhinji unouya deyince Kapadhokiya uye ndinoona vakanga mwoyo chaizvo achibva Kapadhokiya. Ndine chokwadi chekuti avo vanoenda kuKapadhokiya nemharidzo uye mharidzo yeKayseri vanotendeukira Kayseri.
THY Kayseri Director Fatih Inan vakati, "Takaita chikamu chekutanga cheKayseri kusimudzira musangano nemusangano uyu. Muchikamu chechipiri, tinoda kuitisa vamiriri veThailand muKayseri. Mushure meizvozvo, isu tinoronga kutanga kutengesa. Asi izvo, THI iri kuongorora mutengo unokosha wekuThailand-Kayseri ndege, "akadaro.
Kupinda chirongwa ichi muThailand Erciyes Inc. Sachigaro weBhodi. Murat Cahid Cıngı akapa vashandisi vekushanya ruzivo rwakadzama nezve ski masisitimu e Erciyes nemikana yakapihwa nedunhu.
Dr. Erciyes akataura kuti ivo vari kuwedzera webasa ravo rekusimudzira nyika zuva nezuva. Murat Cahid Cıngı akati, "Sa Erciyes AŞ, isu tinoyedza kusvika kumisika mitsva mazuva ese. Southeast Asia ndeimwe yacho. Nekuti vanhu vazhinji vanobva mudunhu iri vanouya kuKapadhokiya. Tinogona kugamuchira vashanyi vanouya kuKapadhokiya kwemazuva mashoma mu Erciyes nemabasa ekukurudzira mumatunhu aya. Nechinangwa ichi, isu takatanga chirongwa chekushambadzira neCHI. Sekuratidzira kweizvi, takaunza Erciyes muBangkok pamwe chete nevashanyi muKayseri. Pachiitiko ichi, nhaurirano dzakaitwa nemahofisi makuru ekushanya eThailand nedunhu. "Takaudza vamiririri kuti tinokwanisa kutora vashanyi vavakatumira kuKappadocia mu Erciyes uye kuti magadzirirwo eizvi akagadzirira."
Erciyes Yakatangwa paWorgest Largest Tourism Fair
Kukosha kwaKayseri Erciyes Anova kukosha kweNyika
Grand Prix Erciyes uye Kuruka kwaKayseri Yarış
Kayseri Kuungana Magetsi Mabhasi
Muna Erciyes "Iwe Manje Unogona Kugonesa" Kutengeswa…
Hondo Yenyika yeWalkkite Yakaitwa muErciyes
Alanya Castle Cable Mota Project kuenda kune maAgency Ma…
Nhanganyaya yaBabadağ Teleferic Project
New Generation National Freight Car Yakatangwa
New Trambuses Yakaunzwa muMalatya
Ray Welder Certified Project yakaiswa muSivas
National Submarine Project Yakasarudzika Yakatangwa